Incwadana yemigaqo yokuvavanywa kweedolophu zedolophu- iGeofumadas
Incwadana yemigaqo yovavanyo lweedolophu
NgoJuni, 2013 cadastre, Ukufundisa i-CAD / GIS
Kuvavanyo lwe-cadastral kukho iindlela ezahlukileyo, enye yazo isetyenziswa eLatin America nakwiCaribbean yindleko yokubuyisa uthabathe ukwehla okuqokelelweyo -ngeenguqu ezincinane kunye eziyimfuneko-.
Okwangoku yenye yeemveliso endiziqhenyayo ukuba ziphuhlise, ngakumbi ukususela ekubeni ukwakhiwa kwayo kwakubandakanya ubugcisa nobugcisa babantu abafuna ukuziva beqhelekileyo kunye nabaqhelekileyo. Ngokombono wam baye bahlala bebonakala bekhulu kakhulu ngenxa yabo
kwiinyaniso ezingaphezu kweengkondlo.
Iqukethe, kwiphepha elizalisa ukukhulelwa endandenza ngaphambili kwaye isishwankathela indawo elungileyo yokusetyenziswa kwendlela kumda wobungakanani bamaphepha avumela ukupapashwa kwifomathi eprintiweyo ye-easel. Ndiyipapasha ngoku kuba komnye umntu inokuba luncedo, kwaye ngaphezulu kwayo yonke into inombulelo kwiqela labantu-ngoku sele sele ndikhulile-ukuba kwiminyaka engama-30 eyadlulayo bayibhala phantsi eyona njongo yayo ibalaseleyo ngomatshini wokuchwetheza kunye ne-chinographs; siyibhale nje ngendlela elula ekukhangeleni ukwandisa ubomi bayo kuba koomasipala abaninzi iyaqhubeka nokusetyenziswa ngobizo olungcwele. Kananjalo kuba ndiyakholelwa ukuba njengoko siphinda silusebenzise ulwazi, iitalente ezintsha ziyavela ezilusebenzisayo esingacingi nokucinga ngalo.
Oko uxwebhu luqulethe
Uxwebhu luhlelwe ngamacandelo amathathu:
Inxalenye yokuqala inemiba yethiyori malunga nokuxabiseka kunye nendlela. Oku kunokuba luncedo kwiinkqubo zoqeqesho okanye ukuthethelela amaxwebhu enkqubo afuna ingqiqo.
Uvavanyo olukhulu lweepropati
Izinto ezichaphazela ukubaluleka komhlaba
Ukuhlaziywa kwedolophu yasekuhlaleni
Uqikelelo lwezakhiwo zasezidolophini
Ke, kweli candelo lilandelayo, uhlobo lwegalelo elifunekayo lokusebenzisa indlela luchaziwe. Kucacile ukuba iya kwiziseko ngokubhekisele kwizixhobo; Kuza kubakho abo benza igalelo lobuchwephesha ngakumbi, bethatha ithuba lobuchwephesha be-GIS kwinqanaba eliphezulu.
Umqulu wohlengahlengiso lwezakhiwo eziqhelekileyo
Ukwakha ikhathalogu yamanani
Imephu yexabiso lomhlaba wasezidolophini
Maxwebhu a maxwebhu
Izixhobo kunye nezinto zokusebenza
Izakhiwo zokusetyenziswa kwendlela
Kwaye kwicandelo lesithathu libandakanya ukuzaliswa kwefom yeedolophu, kunye nemimandla yayo, ekugqityiweni kokuvavanya kunye nokubalwa kweerhafu.
Apha ungabona umbhalo odibeneyo.
Ukulinganiswa komqulu weCadastre by G_Alvarez_
Ngenxa yokuba ngumqulu kwinqununu, ingaba mfutshane kwizihloko ezibhalwe kwenye incwadi okanye kwiDVD yezemfundo eza nekiti.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Template ukwenza ifayile DXF ukusuka kuluhlu Excel lamanqaku
Post Next I-Vbookz, umdlali obalaseleyo we-iPad / iPhone / iPodOkulandelayo »